Maxkamada EU: Waa sharci daro in la diido dib u dajinta qoxootiga. - NorSom News
Maxkamada EU: Waa sharci daro in la diido dib u dajinta qoxootiga.
Maxkamada Midowga Yurub ayaa go´aan ay soo saartay ku sheegtay inay sharci daro tahay in Wadamada katirsan EU-da ay diidaan inay qaabilaan qoxootiga magangalyo doonka ah.
Maxkamada ayaa qaaday dacwad ka dhan wadamada Poland, Hungry iyo Czech republic, kuwaas oo sanadkii 2015 diiday inay dib u dajin u sameeyaan qoxooti ay dalalka Yurub ku heshiiyeen inay qeybsadaan, dib u dajina u sameeyaan. Si culeyska looga qaado dalalka Italy iyo Malta oo codsaday in lala qeybsado culeyska qoxootiga ku yimaada doomaha.
Waxaana sadexdaas wadan kusoo aaday inay dib u dajin u sameeyeen 10.000 qof oo qoxooti ah, kuwaas oo ahaa saamigii kusoo aaday dalalkaas. Dalalka kale ee EU-da ayaa qaatay tirada qoxootiga kusoo aaday, balse sadexdaas wadan ayaa diiday inay hal qofna qaabilaan.
Maxkamada EU-da ayaa sheegtay in sadexdaas wadan ay jabiyeen heshiiska kamid ahaanshaha EU-da, ayna sharci daro aheyd inay diidaan dib u dajinta qoxootiga ee midowga Yurub ay ku heshiiyeen.
Waxaana hada la filayaa in lagu xukumi doono malaayiin Euro oo ganaax ah.
F.G: Si aad ula socoto wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal ah, halkan riix, kadibna Subcribe dheh(Abonner) barteena Youtube-ka.
Xigasho/kilde: EU-dom: Ulovlig å ikke ta imot flyktninger
Previous articleOslo: Qofkii labaad oo soomaali ah oo xaley u geeriyooday COVID-19.
Next articleFarmashiiste Kassim: Talaabooyinkan samee marka aad farmashiyaha kasoo adeeganeysid.